कर्पोरेट नेपाल , ८ चैत्र २०७६, शनिबार, ०१:५० pm
काठमाडौं । एनसेलले आफ्ना सबै प्रिपेड ग्राहकहरुले अब सुलभ दरमा भ्वाइस तथा एसएमएस सेवाबाट फाइदा लिन सक्ने जनाएको छ । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले रु १० (करसहित रु १२.७७) मा भ्वाइस र एसएमएस सेवा बन्डलिङ गरिएको ‘नाइट कल र एसएमएस प्याक’ योजना ल्याएको हो ।
यो प्याक सुचारु गर्ने ग्राकहले ४८० मिनेट टक टाइम र ४८० वटा एसएमएस पाउँछन् । बिहीबार (चैत्र ६) बाट ९० दिनका लागि संचालनमा आएको यो प्याकअन्तर्गत पाईने टक टाइम र एसएमएस एनसेल नेटवर्कमा राति १० देखि बिहान ६ बजेसम्मको समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसको समयावधि २४ घण्टाको हुन्छ ।
ग्राहकले एस्ट्रिक्स१७११८एस्ट्रिक्स३एस्ट्रिक्स२ह्यास डायलगरी वा एस्ट्रिक्स१७११८ह्यास डायलगरी तेस्रो विकल्प छानेर यो प्याक सुचारु गर्न सक्छन् । साथै अंग्रजीमा एनयु टाइप गरी १७११८ मा एसएमएस पठाई पनि यो प्याक लिन सक्छन । आफ्नो आवश्यकताअनुसार ग्राहकले यो प्याक जति पटक पनि खरिद गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
यस प्याकअन्तर्गत उपलब्ध हुने टक टाइम र एसएमएस खपत गरी सकेपछि विद्यमान दरमा यी सेवाहरु प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्घताअनुरुप भ्वाइस र एसएमएस बन्डलिङ सहितको यो आकर्षक प्याक ल्याएको एनसेलको भनाई छ ।
एनसेलले गत पुष १६ देखि भ्वाइस प्याकको खरिदमा निःशुल्क नाइट एसएमएस पनि दिँदै आएको छ । यो योजनाअन्तर्गत ग्राहकले भ्वाइस प्याकको टक टाइम भोलुम बराबरको अन नेट नाइट एसएमएस पाउँदै आएका छन् ।
एनसेलले ल्यायो ‘अनलिमिटेड नाइट भ्वाइस प्याक’
एनसेलको ‘अल नेट भ्वाइस प्याक’ अफर सञ्चालनमा
नेपाल टेलिकमका अनलिमिटेड डाटा र भ्वाइस प्याकहरु के के छन् ?
नेपाल टेलिकमको नयाँ अफरः १० रुपियाँमा १०० मिनेट कल, ८० एमबी डाटा
नेपाल टेलिकमद्वारा ‘वान आवर अनलिमिटेड’ प्याक सार्वजनिक, २० रुपियाँमा प्रयोग गर्न सक्ने
एनसेलको भ्यालेन्टाइन अफरः रु. १२७.६९ मा ७०० मिनेट अन नेट टक टाइम
महाप्रसादको पहिलो हस्ताक्षरः एक महिनाभित्र कोरोना प्रभावको अध्ययन गर्ने निर्णयमा
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दुबैको बैठक आज, नेकपाको सचिवालय, काँग्रेसको पदाधिकारी
मेगा बैंकका ४९ शाखाबाट आज बैंकिङ सेवा दिइने, सूचीसहित
सिद्धार्थ बैंकका यी ५० शाखा आज खुल्ने, सूचीसहित